Telo volana maimaim-poana Spotify Premium miaraka amin'ny TikTok | Vaovao IPhone
Telo volana maimaim-poana Spotify Premium miaraka amin'ny TikTok
Amin'ity indray mitoraka ity dia ny tambajotra sosialy malaza izay ho azo antoka fa manana Spotify Premium ianao mandritra ny telo volana dia maimaimpoana tanteraka ary tsy mila misoratra anarana na aiza na aiza, misintona fampiharana, na zavatra hafa. Ity dia fampiroboroboana izay miasa mandritra ny fotoana voafetra ary hahafahan'ny mpampiasa mankafy ny mozika mivantana tadiavin'izy ireo amin'ny serivisy Spotify.
Ny zava-dehibe dia ny tsy fisian'ny famandrihana amin'ny endriny rehetra, ny hany takiana takiana amin'ity lafiny ity dia ny fananana kaonty TikTok (na hampiasa an'ity tambajotra sosialy ity isika na tsia) ary ilay mpampiasa izay maniry afaho maimaim-poana ireo telo volana ireo Mbola tsy nisoratra anarana tamin'ny serivisy premium mihitsy aho talohan'izay.
Ny fomba hanafahana ireo telo volana ireo
Ny dingana hahazoana ireo telo volana maimaim-poana amin'ny Spotify Premium dia tsotra. Ny zavatra voalohany dia mandehana mivantana amin'ny fampiharana TikTok ary kitiho ny menio ambany "Me". Raha vantany vao ao anatin'ny mombamomba anao dia tsy maintsy miditra amin'ilay kisary miseho eo ambony ianao miaraka amina marika mozika.
Eto ny fampiroboroboana ny 3 volana Premium maimaim-poana ary mila misintona sy tsindrio fotsiny ny safidy isika «Mahazoa maimaimpoana 3 volana» izay miseho mena. Eto izahay dia hanampy ny kaonty Spotify maimaim-poana ary hahazo mivantana ny Premium ianao mandritra io fotoana io.
Tokony holazaina fa amin'ity fotoana ity no hananantsika dia ny Spotify Premium Individual, fa raha vao mandeha ity dia hampandoaviny anay ny 9,99 euro amin'ny drafitra isam-bolana ary azo foanana amin'ny fotoana rehetra. Etsy ankilany, zava-dehibe ny manamarika fa ny tolotra dia mihetsika manomboka amin'ny 12 Jolay 2021 hatramin'ny 25 Jolay 2021, raha tsy manavotra azy ianao amin'izao fotoana izao dia tsy ho vitanao izany any aoriana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Telo volana maimaim-poana Spotify Premium miaraka amin'ny TikTok